बीएससी–सीएसआईटीका लागि एशियन स्कूल अफ म्यानेजमेण्ट | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा बीएससी–सीएसआईटीका लागि एशियन स्कूल अफ म्यानेजमेण्ट
on: १२ भाद्र २०६९, मंगलवार ००:०० शिक्षा
ई. अनिललाल अमात्य
प्रिन्सिपल, एशियन स्कूल अफ म्यानेजमेण्ट
काठमाडौंको सामाखुशीस्थित एशियन स्कूल अफ म्यानेजमेण्टले त्रिविसँगको सम्बन्धनमा गतवर्षदेखि बीएससी–सीएसआईटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल यस कलेजका १५ जना सीएसआईटी विद्यार्थी दोस्रो सेमेष्टरमा अध्ययनरत छन् । कलेजले मध्यमवर्गीय विद्यार्थीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रिन्सिपल ई. अनिललाल अमात्यले बताए । सूचनाप्रविधि क्षेत्रकै दक्ष शिक्षक तथा अनुसन्धानकर्ताहरू मिलेर सञ्चालन गरिएको यस कलेजले आईटीका विद्यार्थीलाई कम्प्युटर सफ्टवेयरसम्बन्धी विभिन्न प्रोग्राम विकास गर्न सघाइरहेको छ । दुई हप्ताअघि बीएससी–सीएसआईटी पढाइ हुने १२ ओटा कलेजबीच आईटीको विषयमा भएको हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा कलेजले दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । यसै सेरोफेरोमा अभियान दैनिकसँग सीएसआईटी कार्यक्रमका सम्बन्धमा गरिएको कुराकानीका क्रममा प्रिन्सिपलले व्यक्त गरेको विचारको सार :
हाल डेढ दर्जनभन्दा बढी कलेजले बीएससी–सीएसआईटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी कलेजले उत्पादन गर्ने सीएसआईटीका दक्ष जनशक्तिको देशभित्रै खपत हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वविद्यालय तथा राज्यले त्यति चासो दिएको पाइँदैन । त्यस्तै मागको अनुपातमा उत्पादनमा तालमेल मिल्छ/मिल्दैन भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसैले, यी विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यो विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त ज्ञान र शीप भएकाले विश्वको जुनसुकै मुलुकमा गएर रोजगार बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
तर, विदेशमा रोजगारी पाए पनि कहिलेकाहीँ सम्बन्धित देशमा असहज परिस्थिति आउने, रोजगारी कटौती हुनेलगायतको समस्या पनि देखिने गरेको छ । जस्तो, सिरियामा रोजगारीका लागि गएका ९ सय नेपाली एकताका अलपत्र परेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न पनि सक्नुपर्छ ।
बीएससी–सीएसआईटी विषयको अध्ययन पूरा गरिसकेका विद्यार्थीलाई इण्टर्नशिप कहाँ गराउने भन्ने विषयमा केही समयअघि त्रिवि डिन कार्यालयले एक छलफलको आयोजना गरेको थियो । त्रिविले बैङ्किङ क्षेत्रमा इण्टर्नशिप गराउने कुरा पनि गर्‍यो । तर, ग्राहक वा सेवाग्राहीको करोडौं/अर्बौं रुपैयाँ राखेको बैङ्कको सूचना प्रणालीमा थुप्रै डाटा हुन्छन् ।
त्यसैले, त्यहाँ सुरक्षा संवेदनशीलताको गम्भीर प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरा भएको थियो । कुनै पनि कम्पनीको डाटा भनेको महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले, कलेजले नै इण्टर्नशिपका लागि सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सेवाप्रदायक कम्पनी सञ्चालन गर्नु पनि आवश्यक छ ।